Na ao An-tanindrazany na ao Etazonia, Manana Anjara Toerana Lehibe ao amin’ny Kolontsaina Vietnamiana ny Tononandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2017 4:44 GMT
Tononandro Vietnamiana vakiana ao amin'ny fivarotana lehibe. Sary avy amin'i Loa
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jenny Lý ity dia avy amin'ny Loa, tranokalam-baovao sy radio antserasera tetikasan'i Viet Tan izay mandefa tantara momba an'i Vietnam. Navoakan'ny Global Voices indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Phước Lộc Thọ, fantatra koa hoe Tsenambarotra Zaridaina Aziatiaka dia toerana fototra ara-barotry ny vondrom-piarahamonina Vietnamiana-Amerikana ao amin'ny Faritra Orange, California. Saingy misy toerana fakàna aina eo anivon'ireo mpiantsena misomebiseby sy ny tabatabam-peo. Ao amin'ny rihana faharoa no misy azy: alitara iray. Tsy lavitra eo dia mahita lahiantitra iray eo amin'ny faha-70 taonany. Hoy ny vakin'ny marika eo anoloan'ny latabatra hipetrahany «Chấm Tử Vi» – mijery tononandro.
«Matetika, te hanontany momba ny fitiavana sy ny asa na koa ny tsy fahombiazan'ny fandraharahan'izy ireo ny olona», hoy i Bùi Minh Lê, mpamaky tononandro hatry ny ela, nanohy ny fanaony tany Việt Nam ao Amerika amin'izao fotoana izao. Nolazainy fa marobe ireo olona mila torolalana, indrindra rehefa miditra tokon-tantara vaovao eo amin'ny fiainan'izy ireo ny olona.
Mampiasa karazana tononandro Shinoa manara-bolana ny tononandro Vietnamiana. Mampiasa ny astrolojia sy ora, daty, volana ary ny taona nahaterahan'ny olona izany hanaovana ny tsikilon'ny hoavy. Ahitana biby 12 anaty tsingerina 12 taona ny tononandro Vietnamiana fa tsy marika 12 ao anatin'ny herintaona. Milaza zavatra momba ny toetrantsika sy ny fiainantsika ny fampifandraisana ny biby amin'ny taona nahaterahantsika.
Satria efa tamin'ny volana lasa ny Taombaovaon'ny volana, nitombo hatrany ny filharan'ny olona tonga ao amin'i Bùi. Te-hahafantatra mafy izay ho avoakan'ny taona 2017 eo amin'ny fiainan'izy ireo ny olona.
Saingy misy kosa ireo misalasala. Iray amin'izany i Phan Việt, izay feno 60 taona katroka amin'ity taona satria teraka tamin'ny taona akoholahy. Tsy mino ny tononandro na ny tsikilo hoavy tử vi izy – na dia taonany aza ny 2017. Milaza ny mpino fa tena zava-dehibe izany raha taonan'ny bibinao. Hoy i Phan:
Raha tafavory ny fianakaviana, fantatrao fa miseho matetika ity lohahevitra ity indrindra mandritra ny Taombaovao, tonga ny olona Tết ary voaresaka tampoka ity lohahevitra ity. Eh! akoholahy ity taona ity, ary nanomboka nilaza tamiko izy ireo fa amin'ity taona ity, hanana fitiavana aho, ary angamba hiova ny ara-bolako, zavatra tahaka izany. Mihaino anareo aho saingy tsy mba matoky izany hatramin'izay.
Saingy mihevitra kosa i Vũ Cường, 68 taona, mpitsidika tao amin'ny Phước Lộc Thọ sady mpampianatra mpisotro ronono fa fomba mahafinaritra ahafantarana ny tenanao sy ny fiainanao ny tononandro. Mitantara ny fahasarotan'ny tononandro Vietnamiana amin'ny maha rafitra fandaharana azy izy:
araka ny tantaran'i Shina manokana, sy ny tantaran'ny kolontsaina Aziatika amin'ny ankapobeny, nanondro ny biby mba hanehoana ny fotoana ny olona. Nandahatra ny taona miaraka amin'ny biby 12 izy ireo, anarana iray ho an'ny zavatra goavana ary iray hafa ho an'ny biby. Manomboka amin'ny zavatra Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý izy ireo. Avy eo, natambatra tamin'ny iray amin'ireo biby 12: Voalavo, Omby, Liona, Saka, Dragona, Bibilava, Soavaly, Ondry, Gidro, Akoholahy, Alika, Kisoa.
Rafitra Tononandro Tatsinanana. Sary avy amin'ny Loa
Mandrafitra ireo mampiavaka ny mahaizy azy ny tsirairay sy ny taona ireo faritr'habakabaka folo, marika biby 12 ary ny fampiarahan-tsinga dimy karazana ao aminy. Ohatra, fantatra ho Đinh Dậu ny taona 2017, na taonan'ny Akoholahy mena. Sokajiana ho iray amin'ireo rafitra tononandro taloha indrindra manerantany ny tononandro tatsinanana, efa tany amin'ny 3.000 taona mahery tany. Voalaza fa narafitry ny mpanabe ara-panahy ny tononandro, izay tompon'andraikitra tamin'ny fihazonana ny fahasalamana sy ny fifandanjana teo amin'ny olona tamin'izany fotoana izany.
Milaza i Trang Nguyễn, mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny Fianarana Ara-piarahamonina ao amin'ny oniversite Clark ao Worcester, Massachusetts fa mifankafantatra ny Vietnamiana amin'ny alalan'ny fampiasana ny tononandro:
Amin'ny kolontsaina Vietnamiana, manontany olona ianao hoe inona ny taonan'ny biby zodiakany ary amin’ izany afaka milaza ny taonan'izy ireo ianao satria misy biby miisa 12 ao anatin'ny kodiarana ka miverimberina isaky ny 12 taona izany mba ahafahanao milaza hoe taranaka oviana sy hoe tsingerina inona amin'ny 12 izy ireo ka afaka manao kajy ny taona ao an-tsainao ianao. Izany no mahatonga anao rehefa mihaona amin'ny Vietnamiana zokiolona, tsy manontany ny taonanao izy ireo na ny isan'ny fotoana nandalovan'ny taona nahaterahanao, ny taonan-tononandronao anefa afaka milaza ny taonanao, ary afaka milaza ihany koa ny karazan-toetranao sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'izany taona izany.
Nampian'i Nguyễn fa mahay tsianjery ny taonan'ny bibin'ny tsirairay ny fianakaviany rehetra. Hoy izy, “…dragona ny reniko, saka aho, soavaly ny raiko, omby ny anabaviko, bibilava ny rahalahiko, dragona ny zana-drahalahiko zokiny indrindra ary alika ny zana-drahalahiko zandriny indrindra. “
Vũ, ilay mpampianatra misotro ronono kosa nilaza fa maneho toetra samihafa izay mety hitondra harena na fanamby betsaka ny bibin-tononandro tsirairay. Indraindray, mety manampy ny fanazavana ny antony mahatonga ny olona sasany hanao fihetsika na zavatra sasantsasany izany. Nilaza izy fa, “… maneho ny hery ny liona, maneho ny harena ny dragona, ary maneho ny asa mafy ny voalavo.”
Araka ny fijerin'ireo mpino, tsy ny tononandro ihany no ahafahana mahita mialoha ny toetry ny olona tsirairay fa ahafahana maminany ny taona ho avy ihany izany. Mba hijerena izay miafina amin'ny taona 2017: ny taonan'ny Akoholahy mena, tokony ahatakatra ny momba ilay biby ianao.
Fantatra amin'ny fihetsiny miavonavona ny akoholahy, matoky tena. Tsy vahiny aminy ny fidirana manaitra. Fantatra amin'ny fahaizany miasa mafy sy tsy mba miala an-daharana ity marika tononandro ity. Tsy matahotra ny ho avo feo, masiaka be ronono sy mahitsy fiteny ny akoholahy.
Raha iverenana ny ao Phước Lộc Thọ, matetika manontany tena ilay mpamaky tononandro, Bùi raha karazana filazam-bintana (harena) ny famakiana tononandro ataony. Hoy izy, “Tsy mitovy amin'ny tử vi ny filazam-bintana. Tử vi dia singa fototra mampiasa ny daty nahaterahana.“
Milaza i Bùi fa misy siansa ao ambadiky ny Tử vi ary miaiky an-kitsimpo izy fa tsy ny olona rehetra no mino ny tononandro. Na izany aza, mbola tonga isan'andro ao amin'ny tsenambarotra lehibe izy hamaky ny tononandron'ny olona. Mipetraka ao amin'izany rihana faharoa ao amin'ny tsenambarotra izany izy izay isongadinan'ny sarina liona telo goavam-be eo anoloana maneho vintana, harena, ary ny faha-ela velona.
Henoy ity fandraisam-peo ity raha te-hahafantatra ny antony mahatonga ny tononandro Vietnamiana mampiseho sary saka fa tsy bitro, tahaka ny zodiaka Shinoa.